Global Voices teny Malagasy » Mianàra Fomba 40 Firesaka Amin’ny Tànana Ampiasain’ireo Aborizena Hifandraisany Manerana Ny Tany Efitra Andrefan’i Aostralia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2015 3:33 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika avylavitra
Sokajy: Aostralia, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teratany, Rising Voices
Manoloana ny toetaniny henjana sy ny toetrandro tsy mivalo, mety ho toerana sarotra iainana ny Great Sandy Desert  (Efitra Torapasika Midadasika) any Andrefan'i Aostralia. Ho an'ireo mifofotra miaina ao amin'ity faritra vitsy mponina ity, ny elanelana midadasika manasaraka azy amin'ny tany efitra faharoa lehibe indrindra ao Aostralia dia afaka manaporofo ihany koa ny maha-fanamby goavana ny fifandraisana amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy, ho an'izay maniry hifandray.
Mba hanekena ny fisian'ity fitaovana azo ampiharina ity, niaraka niasa tamin'ny vondron'ireo vehivavy zokiolona mafàna fo avy amin'ny vondrom-piarahamonina Balgo  ilay mpamokatra ao an-toerana, Willi Lempert. Niarahan'izy ireo nanantontosa ny lahatsary iray izay mitantara ny tantaran'ireo fomba 40 firesaka amin'ny tànana.
Efa niasa tao amin'ilay faritra i Lempert, fony hevitra hamokatra lahatsary fanazavana no nitsiry. Nohazavainy  ny maha-zava-dehibe ireny fomba firesaka amin'ny tànana ireny:
Ilay lahatsary koa, izay ampahany amin'ny tetikasa “Mother Tongue ” (Tenindreny) nokarakarain'ny “ABC Open and First Languages Australia” (ABC Fiteny Misokatra sy Voalohany – Aostralia), dia ampisaina hanandratana ny Kukatja  fiteny ao an-toerana, teny iray tandindonin-doza tsy misy afa-tsy 1.000 sisa no mpiteny azy ankehitriny. Ao anatin'ilay lahatsary, ho an'ny tsirairay amin'ireo fomba firesaka amin'ny tànana asehon'ireo vehivavy, dia misy teny iray mifandray aminy amin'ny fiteny Kukatja arahan'ny dikany amin'ny fiteny Anglisy.
Nosoratan'i Lamprey tao anaty lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy ny fahafinaretany sy ireo vehivavy niaraka taminy nandritry ny namokarana ilay  lahatsary.
Ireo vehivavy zokiolona, toa an'i Payi Payi sy Manaya  izay asongadin'ilay lahatsary, dia mitàna toerana fototra amin'ny fiainan'ilay vondrom-piarahamonina. Amin'ny maha-mpikambana azy ireo ao amin'ny Foibe momba ny Lalàna sy ny Kolontsaina ho an'ny Vehivavy Kapululangu, izy ireo no fitaovana hamaritana ny làlana mankany amin'ilay vondrom-piarahamonina. Lazain'ny tranonkala natao ho an'ilay foibe hoe , “Tsy misy izay mitranga ao amin'ny Kapululangu ka tsy hidiran'ny Zokiolona.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/28/72511/
 namokarana ilay: http://www.academia.edu/13580788/Marumpu_Wangka_Kukatja_Hand_Talk
 Payi Payi sy Manaya: http://www.kapululanguculturecamps.com/#!our-elders/c1l93
 tranonkala natao ho an'ilay foibe hoe: http://www.kapululanguculturecamps.com/#!kapululangu/c55t